နျူကလိယ၏ထိခိုက်လွယ်မှုသည်ဆုလာဘ် (၂၀၀၇) - Your Brain On Porn ဆုကိုမျှော်လင့်ရာတွင်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်တွေ့ကြုံရသည်
ဆုလာဘ်မြျှောချိုးဖောက်မှုများဖို့နျူကလိယ accumbens ၏ sensitivity (2007)
Neuroimage ။ 2007 ဇန်နဝါရီ 1; 34 (1): 455-61 Epub 2006 အောက်တိုဘာ 17 ။
Spicer J, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, ယုန်က TA, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, ကာဇီခ.
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာဗေဒဆိုင်ရာ Sackler Institute၊ Cornell တက္ကသိုလ်မှ Weill Cornell ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်၊ 1300 York Avenue၊ Box 140, New York, NY 10021, USA ။
ဒီလေ့လာမှုက ventral frontostriatal ဒေသများကွဲပြားခြားနားမျှော်လင့်ထားနှင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်ရလဒ်များကုဒ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ parametrically ဆုလာဘ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့် ventral striatum နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) တွင်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေအဘို့ဆုနှင့် nonreward ဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏နောက်ကျစမ်းသပ်မှုများအရဘာသာရပ်များသည်အနိမ့်ဆုံးသောဖြစ်နိုင်ချေရှိမှုနှင့်အတူအခြေအနေအတွက်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ အာရုံကြောအဆင့်တွင်, နျူကလိယ accumbens (NAcc) နှင့် OFC နှစ် ဦး စလုံး nonrewarded စမ်းသပ်မှုတွေမှဆုလာဘ်ဆွေမျိုးမှသာ။ ကြီးမြတ် activation ပြပေမယ့် accumbens မျှော်မှန်းဆုလာဘ်ရလဒ်များအတွက်ချိုးဖောက်မှုများအထိအများဆုံးအထိခိုက်မခံဖြစ်ပုံရသည်။ ဤအချက်အလက်သည်မျှော်လင့်ချက်အတွက်ချိုးဖောက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ဆုကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့် frontostriatal circuitry များအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ suggest အကြံပြုအပ်ပါသည်။
တိကျသောခန့်မှန်းချက်များကိုရေးဆွဲခြင်းနှင့်လာမည့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ချက်များအားဖြင့်ချိုးဖောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောအပြုအမူ၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လူသားမဟုတ်သောမျောက်များနှင့်လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအရ dopamine ကြွယ်ဝသော frontostriatal ဒေသများသည်အနာဂတ်ဆုလာဘ်ရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်သောခန့်မှန်းချက်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ ဆုလာဘ် -related ခန့်မှန်းအမှား၏အာရုံကြောယန္တရားများ - အမှန်တကယ်နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်အကြားကွာဟမှု၏ကိုယ်စားပြုမှု (Schultz et al, 1997) - မျှော်လင့်မထားသောမမျှော်လင့်သောဆုလာဘ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလဒ်ပျက်ကွက်မှုတို့ဖြင့်လူသားမဟုတ်သောမျောက်များတွင်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။Hollerman et al, 1998, Leon နှင့် Shadlen၊ 1999; Tremblay နှင့် Schultz, 1999) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ရိုးရှင်းသော Spatial နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည့်နမူနာတာ ၀ န်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။Fiorillo et al, 2003မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်မမျှော်လင့်သောဆုလာဘ်များသို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများကိုဆန်းစစ်ရန်, ဆုလာဘ်ရလဒ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကြိုးကိုင်သော) ။
သက်သေအထောက်အထားများပြောင်းလဲခြင်းသည် dopamine စနစ်ကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ကြားရှိနှင့် Milner, 1954; Montague et al, 2004, Schultz, 2002 ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့) ။ လူသားမဟုတ်သောမျောက်ဝံများလေ့လာမှုအရ dopamine အာရုံခံများသည်မျှော်လင့်မထားသောမူလဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ထိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။Mirencowicz & Schultz, 1994, Tobler et al, 2005) ။ မျောက်၏ ventral tegmental (ရိယာ (VTA) ရှိ Dopamine အာရုံခံများသည်အပြည့်အဝခန့်မှန်းထားသည့်ဆုထက် ပိုမို၍ ခန့်မှန်းခြင်းမခံရသည့် (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေနိမ့်ကျမှုဖြင့်ခန့်မှန်းထားသည့်) အဓိကဆုကိုတုန့် ပြန်၍ ပစ်ခတ်လိမ့်မည် (Fiorillo et al, 2003;Tobler et al, 2005) ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်သည်ဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်ပျက်ကွက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မရသောအခါတူညီသောအာရုံခံဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနှိမ်နင်းသည်။Fiorillo et al, 2003; Tobler et al, 2005) ။ ထို့ကြောင့် dopamine အာရုံခံဆဲလ်များသည်အမှန်တကယ်နှင့်ခန့်မှန်းရလဒ်အကြားကွာဟမှုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းဖြင့်ခန့်မှန်းခြင်းအမှားအတွက်ကုဒ်ပေးသည်။Schultz et al, 1997; Tobler et al, 2005), ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်၏မမျှော်လင့်ဘဲတင်ဆက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လျော့နည်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆုလာဘ်ရလဒ်များမမျှော်လင့်ဘဲပျက်ကွက်မှုရလဒ်များ။
ဆုလာဘ်ရလဒ်ပြောင်းလဲမှုများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့် dopamine ပစ်ခတ်မှုတွင်အပြောင်းအလဲများသည်အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ လူသားမဟုတ်သောမျော်လင့်ချက်လေ့လာမှုများအရမျောက်တစ်ကောင်သည်ကြိုတင်ခြွင်းချက်မရှိသောလှုံ့ဆော်မှု (ဖျော်ရည်ဖြန့်ဝေခြင်း) နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်မျောက်သည်၎င်း၏မျှော်လင့်ထားသည့်တိုးခြင်းကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖျော်ရည်များသယ်ဆောင်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကိုယ်စားပြုသည့်လှုံ့ဆော်မှုများက ပိုမို၍ စောင့်ဆိုင်း။ လျက်ရန်ဖြစ်သည်။Fiorillo et al ။ , 2003).
ရည်မှန်းချက်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အပြုအမူ (ဥပမာ prefrontal cortex) နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒေသများနှင့်ခန့်မှန်းချက်များတွက်ချက်နိုင်သောနေရာတွင်အလိုအလျောက်အစာစားခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာ ventral striatum) နှင့်ဆက်စပ်သည့်အပြန်အလှန်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများတည်ရှိသည်။Shultz et al ။ , 1997; Haber et al ။ , 2003) ။ ဤဒေသများသည်အလယ်အလတ် ဦး နှောက် dopamine အာရုံခံများထံမှပရောဂျက်များမှတဆင့် dopamine နှင့်အလွန်အမင်းစိမ့်ဝင်နေပြီးဤဆက်သွယ်မှုများသည်အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည့်အပြုအမူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အပြုအမူများကောင်းမွန်စေရန်ပံ့ပိုးပေးသောအလုပ်လုပ်သည့် neuroanatomical circuit ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
မကြာသေးမီကလူ့လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများသည်ဤတိုက်နယ်၏ဒေသနှစ်ခုဖြစ်သောနျူကလိယ accumbens နှင့် orbitofrontal cortex ကိုခန့်မှန်းအမှား၏ကိုယ်စားပြုမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသောဖျော်ရည်နှင့်ရေဖြန့်ဝေမှုများသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် NAcc ဆွေမျိုးများတိုးပွားလာသောလှုပ်ရှားမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။Berns et al, 2001) ။ ယာယီအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းအမှား (McClure et al, 2003) နှင့်လှုံ့ဆော်မှု (O'Doherty et al, 2003 O'Doherty et al, 2004) ချိုးဖောက်မှုများကိုလည်း ventral striatum ကိုသက်ဝင်။
ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္lessကိုလျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့လေ့လာမှုများကခန့်မှန်းချက်အမှား၏အခြေအနေများအောက်တွင် OFC ၏ sensitivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပေမယ့် (Bern et al ။ , 2001; O'Doherty et al ။ , 2003; Ramnini et al, 2004 ။ Dreher et al ။ , 2005အခြားသူများမှာ (လူယာ et al ။ , 2003; O'Doherty et al ။ , 2004; Delgado et al ။ , 2005) ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အမှားအပေါ်အလေးပေးမှုနည်းသောလေ့လာမှုများကဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော OFC activation ကိုပြသသည်။O'Doherty et al, 2001; Elliott သည် et al, 2003; Galvan et al, 2005) ဆုလာဘ်တန်ဖိုးလေ့လာမှုမှာ (Gottfried et al, 2003) နှင့် valence (ကော့ et al, 2005; O'Doherty, 2000 O'Doherty, 2003 O'Doherty, 2004) ။ မကြာသေးမီက Kringelbach နှင့် Rolls (2004) အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏မတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်အကောင့်ဖို့ neuroimaging နှင့် neuropsychological စာပေပေါင်းစည်း။ သူတို့ကတစ် ဦး medial- နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဂုဏ်ထူးနှင့် anterior-posterior ဂုဏ်ထူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ medial နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် orbitofrontal cortex သည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုအသီးသီးစောင့်ကြည့်သည် O'Doherty et al, 2001 ; Rolls et al, 2003) ။ အဆိုပါ anterior orbitofrontal cortex စိတ္တဇအားဖြည့်များ၏ကိုယ်စားပြုမှုတွင်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ထင်နေသည် (O'Doherty et al, 2001) အရသာနှင့်ဆက်စပ်သောပိုမိုရိုးရှင်းသောသူများအပေါ် (ဥပမာ De Araujo et al, 2003) နှင့်နာကျင်မှု (ဥပမာ Craig et al, 2000).
ဤရွေ့ကား ventral frontostriatal ဒေသများမကြာသေးမီက (Knutson et al, 2005) စဉ်အတွင်းမျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုး (မျှော်လင့်ထားသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ရလဒ်၏ပြင်းအား၏ထုတ်ကုန်) ၏ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဆုလာဘ်ရလဒ်ကို၏မျှော်လင့်။ ရှုပ်ထွေးသော်လည်းရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းဖြစ်သော 18 ပါဝင်သောပမာဏ၊ ပေါင်းစပ်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် / သို့မဟုတ် valence တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်စာရင်းအင်းစွမ်းအားမရှိခြင်းသည်စာရေးသူအားမက်လုံးနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုတားဆီးခဲ့သည်။ ရလဒ်များ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက် 33%, 66% သို့မဟုတ် 100% ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်တစ်ခုချင်းစီအရာသုံးကွဲပြားအချက်များ, အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှု၏အလေးပေးအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည် ရလဒ်ကိုဆု ရလဒ်ကိုမတိုင်မီဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ထက်အာရုံကြောအဆင့်မှာဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်အတွက်ချိုးဖောက်မှုများမှ sensitivity ကိုဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက်ထက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းထက်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမျှော်လင့်ချက်များချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပေါ်သည့်အခါဆုလာဘ်ရလဒ်မှာဖြစ်ပေါ် dopamine ပစ်ခတ်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆုလာဘ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းနားလည်မှုအတွက်အရေးပါသည်Fiorillo et al, 2003) တစ်ဦး အခိုင်အမာနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်မျှော်လင့်မထားသောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များအပေါ် OFC ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သောခန့်မှန်းချက်များကဤဒေသများအားအကျိုးခံစားခွင့်အပြောင်းအလဲအတွက်ဖော်ပြသည့်ပုံရိပ်လုပ်ငန်းကိုအခြေခံသည် (Knutson et al, 2001; 2005; O'Doherty et al, 2001; Galvan et al, 2005) ။ ကျနော်တို့အသုံးပြုတဲ့ဆင်တူပါရာဒိုင်းနမူနာတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ Spatial နှောင့်နှေးပွဲစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် Fiorillo et al (2003) nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် dopamine အာရုံခံ၏ electrophysiological လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ကျနော်တို့ ventral striatum အတွက်အထူးသဖြင့် NAcc အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲဆုလာဘ်ကယ်နှုတ်တော်မူခဲ့သည်နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်ကယ်နှုတ်တော်မခံခဲ့ရသည့်အခါလျော့ချမယ်လို့သောအခါတိုးမြှင့်မယ်လို့တွေးဆ။ အပြုအမူသည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုအချိန်များနှင့်ဆုအများစုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ သို့သော်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှေးကွေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OFC ရလဒ် (ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်မ) ဆုချဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆပေမယ့် accumbens ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအများဆုံးအထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။ ဤယူဆချက်များသည်ယခင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှအစီရင်ခံချက်များအပေါ်အခြေခံသည် (Galvan et al 2005, စာနယ်ဇင်းအတွက်) နှင့် OFC ၏ဆုလာဘ် - သော့ခတ်လှုပ်ရှားမှုမှဆွေမျိုးဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ parameters တွေကို, သာ။ ကြီးမြတ် striatal ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖေါ်ပြခြင်းလူမဟုတ်တဲ့မျောက်အလုပ်Schultz, et al, 2000) နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးအကျိုးထက်ပုံသေမဟုတ်ဘဲကွဲပြားငွေပမာဏအပေါ်။
fMRI စမ်းသပ်မှုတွင်လက်ျာလက်ဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူကြီးများ (7 အမျိုးသမီး)၊ အသက် 19-27 (ဆိုလိုသည်မှာအသက် 24 နှစ်) ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်များတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဘာသာရပ်အားလုံးကိုပါ ၀ င်မှုမတိုင်မီစစ်ဆေးမှုကိုအတည်ပြုသည့်အဖွဲ့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်ရွေးချယ်မှုနှောင့်နှေးသည့်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခု၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။Galvan et al, 2005) ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related fMRI လေ့လာမှုမှာ (ပုံ 1) ။ ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင်အချက် (၃) ခုစီသည်ဆုတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏကိုရရှိခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောဖြစ်နိုင်ခြေများ (33%၊ 66% နှင့် 100%) တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဘာသာရပ်များအားညွန်ပြသည့်အခါပေါ်လာသည့်အခြမ်းကိုညွှန်ပြရန်နှင့်အမှားများမလုပ်ပဲတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တုန့်ပြန်မှုအား၎င်းတို့၏လက်ညှိုးသို့မဟုတ်အလယ်လက်ချောင်းများကိုနှိပ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ပင်လယ်ဓားပြကာတွန်းပုံ (၃) ခုအနက်မှတစ်ခုသည် 1000 msec အတွက်ဗဟိုပြုတပ်ဆင်မှု၏ဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်ခြမ်းတွင်ကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ပုံ 1) ။ 2000 msec နှောင့်နှေးမှုပြီးနောက်ဘာသာရပ်များအား fixation ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် (2000 msec) မှရတနာသေတ္တာနှစ်လုံး၏တုန့်ပြန်ချက်ချက်ကိုဘာသာရပ်များအားပြသခဲ့သည်။ အကယ်၍ ပင်လယ်ဓားပြကပုံသေ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိနေလျှင်၎င်းတို့၏လက်ျာလက်ညှိုးဖြင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရန်ညွှန်ကြားသည်သို့မဟုတ် ပင်လယ်ဓားပြဟာ fixation ၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ပါလျှင်၎င်းတို့၏လက်ျာလက်ညှိုး။ နောက်ထပ် 2000 msec နှောင့်နှေးပြီးနောက်၊ စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစား၏ဆုဖြစ်နိုင်ခြေကို အခြေခံ၍ ဆုပေးချက်တုံ့ပြန်ချက် (ကာတွန်းဒင်္ဂါးများ) သို့မဟုတ်အချည်းနှီးသောရတနာသေတ္တာကိုမျက်နှာပြင်၏အလယ်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ နောက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမစခင် 1000 sec ကြားဖြတ်ကြားကာလ (ITI) ရှိခဲ့သည်။
ဆုသုံးခုဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေများရှိခဲ့သည်: တစ် 33%, 66% နှင့် 100% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ 33% အခြေအနေတွင်ဘာသာရပ်များသည်စမ်းသပ်မှုများ၏ 33% အပေါ်ဆုချခံခဲ့ရသည်။ အခြားအခြေအနေတွင်ပါသောအခြား 66% တွင်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှမရရှိခဲ့ပါ။ 66% အခြေအနေတွင်ဘာသာရပ်များသည်စမ်းသပ်မှုများ၏ 66% ကိုဆုချပြီးအခြား 33% စမ်းသပ်မှုများအတွက်ဆုချခြင်းမရှိပါ။ 100% အခြေအနေတွင်၊ မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုအားလုံးအတွက်ဘာသာရပ်များကိုဆုချခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များအားလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက် $ 50 ကိုအာမခံထားပြီးအလုပ်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်၍ (တုန့်ပြန်မှုအချိန်နှင့်တိကျမှုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်)၊ $ 25 ထက်ပိုပြီး ၀ င်ငွေရနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုများကို MR စကင်နာနှင့် fiber optic တုန့်ပြန်မှုစုဆောင်းသည့်ကိရိယာ၏ LCD မျက်နှာပြင်တွင် LCD ဗီဒီယိုပြသမှုကိုအသုံးပြုထားသောဘက်ပေါင်းစုံအလုပ်လုပ်သောပုံရိပ်စနစ် (IFIS) (PST, Pittsburgh) ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုတွင် 18 စမ်းသပ်မှုငါးခုပါ ၀ င်သည် (6 တစ်ခုချင်းစီ၏အသီးအသီး၊ 33% နှင့်ဆုချီးမြှင့်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများ၏ 66% ဖြစ်နိုင်ခြေ)၊ 100 min နှင့်6့တစ်ခုချင်းစီ၏ကြာရှည်ခံမှု တစ်ခုချင်းစီကိုပြေးကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်ပေးအပ်တစ်ခုချင်းစီကိုဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 8 စမ်းသပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြေးပွဲတစ်ခုပြီးဆုံးချိန်တွင်ဘာသာရပ်သည်ထိုပြေးပွဲတွင်သူတို့မည်မျှရရှိခဲ့ကြောင်းကိုအသစ်ပြန်လည်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုမစတင်မီဘာသာရပ်များသည်အသုံးပြုသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနှင့်အလုပ်ကိုနားလည်စေရန်သေချာစေရန်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သောအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကိုရလဒ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များအကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုပြောသော်လည်းထိုဆက်ဆံရေး၏အတိအကျကိုတော့မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ပုံရိပ်အား quadrature head coil သုံး၍ 3T General Electric MRI စကင်နာဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Functional Scan များကိုလိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်လိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူခဲ့သည် (Glover & Thomason, 2004) ။ သတ်မှတ်ချက်များထဲတွင် TR = 2000, TE = 30, 64 X 64 matrix, 29 5-mm coronal slices, 3.125 X 3.125-mm in-လေယာဉ် resolution, လှန် 90 °) ၏အစမှာစွန့်ပစ်ရင်နှီးမြှုပ်နှံအပါအဝင် 184 ထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်သည် တစ်ခုချင်းစီကိုပြေး။ ခန္ဓာဗေဒ T1 တွက်ချက်ထားသော In-လေယာဉ်စကဲန်ဒါများ (TR = 500, TE = min, 256 X 256, FOV = 200 mm, 5-mm အချပ်အထူ) ကို 3-D ဒေတာအစုအပြင်အလုပ်လုပ်ပုံများနှင့်တူညီသောနေရာများတွင်စုဆောင်းခဲ့သည်။ မြင့်မားသော resolution SPGR ပုံရိပ် (TR = 25, TE = 5, 1.5 မီလီမီတာအချပ်အထူ, 124 ချပ်) ၏
အဆိုပါ Brainvoyager QX (Brain ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, Maastricht, နယ်သာလန်) software ကိုအထုပ်ပုံရိပ်အချက်အလက်များ၏ကျပန်းသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုမီ, အောက်ပါ preprocessing လုပျထုံးလုပျနညျးကုန်ကြမ်းပုံရိပ်တွေအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်: 3D ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်းတင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်း, အချပ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအချိန် (sinc interpolation ကိုအသုံးပြု။ ) အားဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်အားလုံး၏ Spatial alignment ကိုအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုများအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ရန်, linear လမ်းကြောင်းကိုဖယ်ရှားခြင်း၊3၏ non-linear ပျံ့နှံ့မှုကိုဖယ်ရှားရန် high-pass ယာယီစစ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကြာချိန်သံသရာနည်းခြင်းနှင့် 4mm FWHM ပါသော Gaussian kernel ကို အသုံးပြု၍ Spatial data ချောမွေ့ခြင်း။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောဘာသာရပ်များအတွက်ခန့်မှန်းလှည့်ပတ်ခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုသည် 2mm ထက်မပိုပါ။
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ရရှိရန်သက်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်လက်စွဲညှိနှိုင်းမှုများအားချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုခန္ဓာဗေဒအသံအတိုးအကျယ်နှင့် တွဲဖက်၍ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးထို့နောက် Talairach အာကာသသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Talairach အသွင်ပြောင်းနေစဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်သော voxels များကို 1 mm ၏ resolution သို့ interpolated လုပ်သည်3 ညှိနှိုင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ဒါပေမယ့်စာရင်းအင်းတံခါးခုံမူရင်းဝယ်ယူ voxel အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ နျူကလိယ accumbens နှင့် orbital frontal cortex ကို ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး voxelwise GLM မှဆုလာဘ်ကိုအဓိကခန့်မှန်းသူအဖြစ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ထို့နောက် Talairach ကသြဒီနိတ်က Duvernoy ဦး နှောက် Atlas ကိုရည်ညွှန်းသည်။Talairach & Tournoux, 1988; Duvernoy, 1991) ။
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကို 60 (5 X 12 ဘာသာရပ်များသို့ပြေးသည်) z- ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သောပြေးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအထွေထွေ linear မော်ဒယ် (GLM) ကို အသုံးပြု၍ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဓိကခန့်မှန်းသူသည်ဆုလာဘ်ရလာဒ်၏ရလဒ်အားလုံးတွင်ဆု (ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆုချခြင်း) ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်သူကိုစံတင်ကားသေတ္တာတုန့်ပြန်မှု (တာ ၀ န်တင်ဆက်မှုပမာဏနှင့်တန်ဖိုးကျန်ရှိနေသေးသောအချိန်မှတ်များအတွက် 1 အတွက်တန်ဖိုး 0) ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် hemodynamic တုန့်ပြန်မှု၏ linear မော်ဒယ်ဖြင့်ရရှိသည်။Boynton et al, 1996) နှင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သင်တန်း၏ဒီဇိုင်းကို matrix ကိုတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုများသာပါဝင်ပြီးအမှားစမ်းသပ်မှုများအတွက်သီးခြားခန့်မှန်းသူများဖန်တီးခဲ့သည်။ အကျိုးစီးပွား၏ဒေသများအပေါ် hoc ဆန့်ကျင်ဘက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထို့နောက်ခန့်မှန်းသူများ၏ beta ကိုအလေးအပေါ် t- စမ်းသပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ Monte Carlo ၏ Simulator များကို AFSI အတွင်း AlphaSim ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (ကော့, 1996orbital တိုကျရိုကျ cortex နှင့်နျူကလိယ accumbens များအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.05 mm25,400 နှင့်3mm450 ၏ရှာဖွေရေး volumes ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး p <3 ၏တညျ့ alpha အဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်သင့်လျော်သောတံခါးခုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ MR signal ၏အခြေခံအပြောင်းအလဲများသည်နျူကလိယ accumbens နှင့် orbital frontal cortex တွင်အခြေခံ (အပြောင်းအလဲသည်ချက်ချင်း 20 စက္ကန့်မတိုင်မီကြားကာလ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှရရှိသောသိသိသာသာတက်ကြွသော voxels များထက်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောပျမ်းမျှအားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်
တစ်ခုလုံးကို ဦး နှောက် GLM သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် 50 nonreward စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် (n = 12) ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် 600 ဆုချီးမြှင့်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု (n = 30) နှင့် 12 စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအပေါ်အခြေခံခဲ့သည် (n = 360) ။ ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေများအပေါ်နောက်ဆက်တွဲခြားနားချက်များဆုလာဘ်ကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်များနှင့်မျှမဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်။ အဆိုပါ 100% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေအဘို့အ6ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အဘယ်သူမျှမ nonreward စမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်းဘာသာရပ်နှုန်းပြေး (5) နှုန်း 12 ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ 360% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခွအေနေအဘို့အ 66 ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်4nonreward စမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်းအဘို့အဘာသာရပ်နှုန်းပြေး (5) နှုန်း 12 ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ 240% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေအဘို့, 120 ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေနှင့် 33 nonreward စမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်းဘာသာရပ်နှုန်းပြေး (2) ပြေးနှုန်း (5) ရှိခဲ့သည်။
အလုပ်အပေါ်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အချိန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်များ၏မှီခို variable တွေကို (က 3%, 33%, 66%) x 100 (ပြေး 5-1) ကို5(XNUMX%, XNUMX%, XNUMX%) နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် (RT ကို RT ကို) ) နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆိုလိုတာ။
အလုပ်၏အချိန် (F [2,22] = ။ 12, p <.85) ဆု (ဖြစ်နိုင်သည်၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အဓိကသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် interaction ကမျှ (F [4,44] = 2.02, p <.14) သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေ X ကိုအချိန်ရှိခဲ့သည်။ ယုတ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်အလုပ် (F [8, 88] = 1.02, p <.41) အပေါ်။ ပါဝင်သူများ၏တိကျမှန်ကန်မှုသည်စမ်းသပ်မှု၏ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးအတွက်မျက်နှာကျက်အဆင့်သို့ရောက်သောအခါ (၃၃% အခြေအနေ = ၉၇.၂%၊ ၆၆% အခြေအနေ = ၉၇.၅%; ၁၀၀% အခြေအနေ = ၉၇.၇%) ။
ပျမ်းမျှ RT ကိုအပေါ်အလုပ်အပေါ် (F [8,88] = 3.5, p <.01) ဆုလာဘ်များနှင့်အချိန်ဖြစ်နိုင်ခြေများအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ပေမယ့်အလုပ်အပေါ်အချိန်၏အဘယ်သူမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (F [4,44] = .611 , p <0.59) သို့မဟုတ်အကျိုးကို (F [2,22] = 2.84, p <0.08) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ အဆိုပါသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်၏ Post-hoc t ကိုစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှု၏နောက်ကျစမ်းသပ်မှုတွေ (run 33) (t (100) = 5, p <.11) ကာလအတွင်း 3.712% နှင့် 003% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေများအကြားသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိကွောငျးပြသခဲ့သည် အဆိုပါ 100% အခွအေနေ (ဆိုလို = 498.30, sd = 206.23) မှဆွေမျိုး 33% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခွအေနေ (ဆိုလို = 583.74, sd = 270.23) ဆွေမျိုးများအတွက်ပိုမြန်ယုတ် RT ကိုအတူ။
100% နှင့် 33% အခြေအနေများအကြားပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုအချိန်ကွာခြားချက်သည်အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုမှနှောင်းပိုင်းအထိနှစ်ဆတိုးတက်ခဲ့သည်။ ပုံ 2a) ။ နောက်ထပ်သင်ယူမှုကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးတွင် 33% နှင့် 100% အခြေအနေများအတွက်ဆုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်လှန်မှုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုများအတွက်2(ဖြစ်နိုင်ခြေ) X2(ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းမဟုတ်) ANOVA သည်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် (F (1,11) = 18.97, p = 0.001) ကိုပြသသည်။ RT သည် 33% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသည်။ ပြောင်းပြန်မဟုတ်သော (mean = 583.74, sd = 270.24) နှင့် 100% (mean = 519.89, sd = 180.46) (ပုံ 2b).
အဓိကခန့်မှန်းသူအဖြစ်ဆုချီးမြှင့်မှုဖြစ်နိုင်ချေကို အသုံးပြု၍ မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက် GLM ဘာသာရပ်သည်ဆုလာဘ်၏တုံ့ပြန်ချက် (သို့) မရရှိသောအချိန်၌ပုံစံပြုခဲ့သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက NAcc (x = 9, y = 6, z = -1 နှင့် x = -9, y = 9, z = -1) နဲ့ OFC (x = 28, y = 39, z = -) ရဲ့ဒေသများကိုခွဲခြားသတ်မှတ် 6) (ကြည့်ပါ ပုံ 3a, ခ) ။ nonrewarded စမ်းသပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ဆုခ၏ beta ကိုအလေးအကြား Post-hoc t- စမ်းသပ်မှု (NAcc: t ကို (11) = 3.48, p <0.01; OFC က x = 28, y = 39, z) NACC နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပိုမိုကြီးမားသော activation ပြသခဲ့သည် = -6, t (11) = 3.30, p <0.02)1.
(က) နျူကလိယ accumbens (x = 9၊ y = 6, z = -1; x = -9, y = 9, z = -1) နှင့်ခ) orbital frontal cortex (x = -28, y = 39, z = -6) နှင့် b) တွင် nonrewarded ရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆုချီးမြှင့်ဖို့သာ။ ကြီးမြတ် activation XNUMX, y = XNUMX, z = -XNUMX) ။
နှစ်ခုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆုလာဘ်အချိန်ဇယား (33% နှင့် 66% ဖြစ်နိုင်ခြေ) အတွက်နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်အခွအေနေအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုလာဘ်အချိန်ဇယား (100% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ) အတွက်တစ် ဦး တည်းသာရလဒ်, နှစ်ခုဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များ (ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်လုံးဝမဆုလာဘ်) ရှိခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် OFC တွင်ဆု (အဓိကဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိသောဆု) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း OFC ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကွဲပြားမှုမရှိပါ [F (2,10) = 0.84, p = 0.46) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, NAcc ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေကြိုးကိုင် [F (2,10) = 9.32, p <0.005] ၏ function ကိုအဖြစ်ရလဒ်မှလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကွဲပြားပြောင်းလဲမှုများကိုပြသခဲ့သည်။ အထူးသ, NAcc လှုပ်ရှားမှုမျှော်လင့်ချက် (33% အခြေခံအခွအေနေ) မှဆွေမျိုး (100% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေ) ဆွေမျိုး [t (11) = 2.54, p <.03 ကြည့်ရှုသောအခါမျှော်လင့်မထားသောအခါ (ရလဒ် XNUMX) ဆုလာဘ်တိုးမြှင့် ပုံ 4a] ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် NAcc ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အကျိုးအမြတ်မည်မျှရနိုင်သည်၊ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသော (၆၆% အကျိုးအမြတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေ) မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်မရရှိနိုင်သည့်ဆုလာဘ်များ (၃၃% အကျိုးအမြတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေ; t (66) = 33, p) <.59; ကြည့်ပါ ပုံ 4b) ။ သတိပြုရန်မှာ 33% နှင့် 66% ဆုချသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေများအကြားသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိပါ။ t (11) = ။ 510, p = .62] သို့မဟုတ် 66% နှင့် 100% အကြားဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေများ [t (11) = ဆုရလဒ်များအတွက် 1.20, p = .26] ။ ဆုလာဘ်ရလဒ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု function ကိုအဖြစ် MR signal ကိုအတွက်ပြနေကြသည် ပုံ 4.
နျူကလိယအတွက်အကျိုးကိုရလဒ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ရာခိုင်နှုန်း MR signal ကိုအပြောင်းအလဲများက) ဆုခနှင့်ခ) nonrewarded ရလဒ်များ။
ဒီလေ့လာမှုကဆုလာဘ်ရလဒ်များ၏မျှော်လင့်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ယခင်ကပြသ accumbens နှင့် orbital တိုကျရိုကျ cortex (OFC) တွင်အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်ရလဒ်များအတွက်ချိုးဖောက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည် (McClure et al 2004; Knutson et al, 2005) ။ ကျနော်တို့နျူကလိယ accumbens နှင့် OFC နှစ် ဦး စလုံး nonrewarded စမ်းသပ်မှုတွေမှဆွေမျိုးဆုစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ပြသခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သာနျူကလိယ accumbens ဒီလေ့လာမှုမှာဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်ရလဒ်အတွက်ချိုးဖောက်မှုများမှ sensitivity ကိုပြသခဲ့သည်။ ယခင်အလုပ်တွင် OFC နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတန်ဖိုး (ဥပမာပြင်းအား) အားဆုချခြင်းအပေါ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း၏ပိုမိုကြီးမားသော sensitivity ကိုပြသခဲ့သည်။Galvan et al 2005), နှင့်အတူတကွဒီတွေ့ရှိချက်ကဒီဒေသပြင်းအားနှင့်ဆုလာဘ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ် ဦး စလုံး၏တွက်ချက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ OFC တွင်ဤကိုင်တွယ်ခြင်းများကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်းသည်ရလဒ်တွင်ပိုမိုကောင်းကျိုးသို့မဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဒနာကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။Hsu et al ။ , 2005) ။ MR signal သည်ဤဒေသတွင်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ဤသက်ရောက်မှုများသည်အားနည်းသွားနိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်များရှိ electrophysiological လေ့လာမှုများတွင် (နျူကလိယ accumbens သို့စီမံကိန်း) ဖြစ်သော midbrain ရှိ dopamine neuron များမှာခန့်မှန်းထားသည့်အကျိုးရလဒ်များ (ဖြစ်နိုင်ချေ = 1.0) အားအနည်းငယ်မျှတုံ့ပြန်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော် 100 ထက် နည်း၍ ဆုပေးသောအခါ phasic ပစ်ခတ်မှုပြသသည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအပြီးတွင်ပင်ဖြစ်နိုင်ခြေ%Fiorillo et al, 2003) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည်ဟုမျှော်လင့်သည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆု (33% condition) (100% အခြေအနေ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆုလာဘ်အတွက်ပိုမိုကြီးမားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်များမှ dopamine neuron များကို electrophysiological လေ့လာမှုများ (ဥပမာ၊ Fiorillo et al, 2003) ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းပေမယ့်မပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်အပေါ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်, အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသခဲ့ကြသည် လက်ရှိလေ့လာမှု 66% အခွအေနေမှဆွေမျိုး 33% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအခွအေနေအဘို့အ Non- ဆုစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူ, accumbens အတွက်အလားတူပုံစံပြသခဲ့သည်။2
Dopamine အာရုံခံများကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းတို့သည်မျှော်လင့်ချက်များရှိချိုးဖောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများမှတစ်ဆင့်လှုံ့ဆော်မှုများ (သို့မဟုတ်တုန့်ပြန်မှု) နှင့်ရလဒ်များအကြားဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအခြေအနေများကို encode (Schultz et al, 1997; Mirencowicz နှင့် Schultz, 1998; Fiorillo et al, 2003) ။ ထို့ကြောင့်ခန့်မှန်းအမှားသည်အစပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောသင်ယူမှုအခြေခံမူများနှင့်ကိုက်ညီသောသင်ကြားမှုအချက်ပြတစ်ခုပေးပုံရသည် Rescorla နှင့် Wagner (1972)။ ဒုတိယအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုပြောင်းလဲရန်ဆောင်ရွက်သည်။Schultz et al, 1997; McClure et al, 2004) ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များအများဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုဆီသို့ဘက်လိုက်မှုဖြစ်ကြောင်း။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်စမ်းသပ်မှု၏နောက်ကျစမ်းသပ်မှုများအရ၊ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သည်အမြင့်ဆုံးသောဆုလာဘ် (100% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ) နှင့်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေ (33% ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ) အတွက်ဖြစ်သည်ကိုပြသည်။ ဤသည်အမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်အရေးပေါ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်အကြံပြု, ဆုလာဘ်ရလဒ်နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအနည်းဆုံးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖေါ်ပြခြင်းယခင်ဖြစ်နိုင်ခြေအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်Delgado et al, 2005) ။ နောက်ထပ်သင်ယူမှုကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးတွင် 33% နှင့် 100% အခြေအနေများအတွက်ဆုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်လှန်မှုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နောက်ထပ်သင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတည်ပြုသောဤအခြေအနေများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကို attenuation အတွက်။
ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများ၏အဓိကရည်မှန်းချက်သည်ဆုလာဘ်များနှင့်ဘက်လိုက်မှုအပြုအမူများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည် Robbins နှင့် Everitt, 1996; Schultz, 2004နောက်ခံအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများအပြင်) ။ အားဖြည့်ခြင်းအစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်အပြုအမူအပေါ်မည်မျှလျင်မြန်စွာနှင့်ကြံ့ခိုင်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေကြောင်းအချက်များစွာကအထောက်အကူပြုသည်။Skinner, 1958), ဆုတန်ဖိုး (Galvan et al, 2005) နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုချ (Fiorillo et al, 2003; Delgado et al, 2005) ။ အကျိုးရလဒ် (Pascal, ca 1600s) ၏ပမာဏနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သောမျှော်မှန်းထားသောတန်ဖိုးသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများကိုလွှမ်းမိုးသည်။ဗွန် Frisch, 1967; Montague et al, 1995; ဂူနှင့် Bern, 2002) ။ ရလဒ်ကို (ပြင်းအားအစားဖြစ်နိုင်ခြေထက်) သာလက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်ကွဲပြားသည့်အတွက်အလွန်ဆင်တူလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုအသုံးပြု။ ကျနော်တို့နျူကလိယ accumbens discrete ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများကိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်Galvan et al, 2005) ။ ဤနေရာတွင်နှင့်အခြားနေရာများတွင်တင်ပြသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူယူTobler et al, 2005), ငါတို့ ventral striatum ဖွယ်ရှိဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပြင်းအားနှစ် ဦး စလုံးမှ၎င်း၏ sensitivity ကိုပေးထားမျှော်မှန်းဆုလာဘ်တန်ဖိုး၏တွက်ချက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက် Orbital တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းကဏ္byကိုကဒီဒေသ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions နှင့်ကိုက်ညီသည် Kringelbach နှင့် Rolls (2004)။ သူတို့က OFC ပိုမို anterior နှင့် medial ဝေမျှစိတ္တဇဆုလာဘ်ခြယ်လှယ်မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ OFC activation ဒီယေဘုယျတည်နေရာမှာကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ Electrophysiological လေ့လာမှုများသည် OFC ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောလှုံ့ဆော်မှု၏ပုဂ္ဂလဒိvalue္တန်ဖိုးကို coding လုပ်ရန် (ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ O'Doherty, 2004) ။ ဥပမာအားဖြင့် OFC အာရုံခံများသည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်ဆာလောင်နေစဉ်တစ်စုံတစ်ရာသောအရသာကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်အနေဖြင့်စား မိ၍ အစားအစာ၏အကျိုးကျေးဇူးများလျော့နည်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။Critchley နှင့် Rolls, 1996) ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အခြားသူများက OFC ဆွေမျိုးဆုလာဘ်မှအများဆုံးအထိခိုက်မခံကြောင်းအကြံပြုကြသည် (Tremblay နှင့် Schultz, 1999) နှင့် preference ကိုဆုလာဘ် (Schultz et al, 2000) ။ Neuroimaging လေ့လာမှုများသည်အရသာအပါအ ၀ င်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးရှိသောလူသားများတွင်အလားတူပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။O'Doherty et al, 2001; Kringelbach et al, 2003) olfaction (Anderson တို့ et al, 2003; Rolls et al, 2003) နှင့်ပိုက်ဆံ (Elliott သည် et al, 2003; Galvan et al, 2005တစ်ခုချင်းစီကို activation anterior ထံမှ posterior နှင့် medial ကနေနှစ် ဦး နှစ်ဖက် OFC လှုပ်ရှားမှု၏တည်နေရာအတွက်ကွဲပြားအတူ။ OFC ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည် (O'Doherty et al 2002), ဒါပေမယ့်သာ insofar တုံ့ပြန်မှု၏ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုတိကျတဲ့ဆက်စပ်နေသည် အဘိုး ကြောင်းဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်မဟုတ်ဘဲဆက်စပ်ဆုလာဘ်၏ (O'Doherty, 2004 ) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OFC ရှိဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများကိုမခံစားနိုင်ခဲ့ပါ။ Knutson နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2005) ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းခြင်းနှင့် mesial prefrontal cortex အတွက်ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်အတွက် ဦး နှောက် activation အကြားဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီKnutson et al 2005), ဒါပေမယ့်မအထူး orbital တိုကျရိုကျ cortex ၌တည်၏။ မတူတာကတော့, Ramnani et al (၂၀၀၄ ) တစ် ဦး passive ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းကိုသုံးပြီး medial Orbital တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အပြုသဘောဟောကိန်းအမှားမှ OFC sensitivity ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Dreher et al ။ (2005) ကြိုတင်ခန့်မှန်းအချက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပြင်းအားနှစ်ခုလုံးကိုခြယ်လှယ်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် OFC အမှားခန့်မှန်းခြင်းကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီလေ့လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် OFC သည်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သောဆုများကိုတွက်ချက်နိုင်သည်ဟုယူဆရဆဲဖြစ်သော်လည်းဤတွက်ချက်မှုများသည် cruder (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းဖော်ပြခြင်း) သို့မဟုတ် NAcc တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောတိကျသောတွက်ချက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုနှေးကွေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်ဤဒေသမှအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းမသေချာမရေရာမှုနှင့် / သို့မဟုတ်မရေရာဒွိဟတန်ဖိုးများ၏လှုံ့ဆော်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သည် ဟူဆု (2005)ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက်ချိုးဖောက်မှုများဖော်ထုတ်မှာထက်။ ဟူဆု (2005) ရွေးချယ်မှုများတွင်မရေရာဒွိဟအဆင့် (သတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်မရေရာသည့်ရွေးချယ်မှုများ) သည် OFC တွင်ပါဝင်မှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုပြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤဒေသရှိ MR အချက်ပြမှုသည် ပို၍ ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှုကဤသက်ရောက်မှုများကိုကောင်းစွာသိရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု၏အခြေခံမေးခွန်းမှာကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းမရှိသောရလဒ်များ (ဆိုလိုသည်မှာမျှော်လင့်ချက်များရှိချိုးဖောက်မှုများ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆုလာဘ်ရလဒ်များကိုဟောကိန်းထုတ်ခြင်းနှင့် OFC တို့၏ကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်များကမည်သို့ကွဲပြားခြားနားစွာကုဒ်နံပါတ်ရေးသည်ကိုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ parametrical ဆုလာဘ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကြိုးကိုင်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်နိုင်ခြေဆုလာဘ်အခွအေနေအဘို့ဆုလာဘ်နှင့် nonreward စမ်းသပ်မှုတွေမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များသည်ယခင်လူ့ပုံရိပ်နှင့်လူသားမဟုတ်သော electrophysiological လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။Fiorillo et al, 2003; Schultz, 2002) နှင့် accumbens နှင့် OFC ရလဒ် (ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်မ) ဆုချဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ဤဒေသများအထူးသဖြင့် accumbens တွင်လှုပ်ရှားမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်ယူခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဆုလာဘ်ရလဒ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပတ်သက်သောခန့်မှန်းချက်များဖြင့်ပြုပြင်ရန်ပုံရသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလေ့လာပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဤပြောင်းလဲသောလှုပ်ရှားမှုပုံစံသည် dopamine လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဤဒေသများသို့စီမံခြင်းများကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
1အဆိုပါ NAcc [t (11) = 3.2, p <0.04] နှင့် OFC [t (11) = 3.5, p <0.02] ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအဘို့ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်အတွက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုပြပေမယ့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုလာဘ်အခြေအနေမဟုတ်
2ဆုလာဘ်ရလဒ်ကို 33% အခြေအနေတွင်ချန်လှပ်ထားခြင်းအားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလျော့နည်းသွားခြင်းထက် NAcc လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့သည် Knutson et al ။ , 2001။ ဤရလဒ်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအနက်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုမှာဘာသာရပ်များသည်တရားခွင်၌လှုံ့ဆော်ခြင်းခံရသည်သို့မဟုတ်ထိုတရားခွင်အတွက်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှမရရှိနိုင်ပါကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းခံရသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဤစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဆုလာဘ်ရလဒ်ကိုစမ်းသပ်မှုတလျှောက်လုံးနံပါတ်အနည်းဆုံးခဲ့ကြသောကြောင့်, လှုပ်ရှားမှုဒီအခွအေနေအဘို့အဆက်လက်သင်ယူထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
Anderson A, Christoff K၊ Stappen I၊ Panitz: D, Ghahremani: D, Glover, G, Gabrieli JD, Sobel N. လူ့ olfaction တွင်ပြင်းထန်မှုနှင့် valence ၏အာရုံကြောကိုယ်စားပြု Dissociated ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003;6: 196-202 ။
Bern GS, လူယာသည် SM, Pagnoni, G, ဂူ PR စနစ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုချမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန် modulates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001;21: 2793-2798 ။ [PubMed]
Boynton GM, Engel SA, Glover GH, Heeger DJ ။ လူ့ V1 တွင်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်များ၏ linear systems ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1996;16: 4207-4221 ။ [PubMed]
ကော့ RW ။ AFNI: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု neuroimages ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် visualization ဘို့ဆော့ဝဲ။ ဇီဝဆေးပညာသုတေသနအတွက်တွက်ချက်မှု။ 1996;29: 162-173 ။
ကော့ SM, Andrade တစ် ဦး, Johnsrude IS ။ ကြိုက်နှစ်သက်ရန်သင်ယူခြင်း - လူသား၏ orbitofrontal cortex အတွက်အေးမြသောဆုလာဘ်တစ်ခု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005;25: 2733-2740 ။ [PubMed]
Craig အေဒီ, Chen က K, Bandy: D, Reiman EM ။ insular cortex ၏ Thermosensory activation ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2000;3: 184-190 ။
Critchley HD, Rolls ET ။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုသည် bitactory နှင့်အမြင်အာရုံခံဆဲလ်များ၏တုံ့ပြန်မှုကို orbitofrontal cortex ရှိ orbitofrontal တွင်ပြုပြင်သည်။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1996;75: 1673-1686 ။ [PubMed]
De Araujo IET၊ Kringelbach ML, Rolls ET, McGlone F. လူ့ခံတွင်းခံတွင်းရှိရေကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ရေငတ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 2003;90: 1865-1876 ။ [PubMed]
Delgado MR, Miller က M, Inati S, Phelps EA ။ ဆုလာဘ် -related ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာသင်ယူမှုတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2005;24: 862-873 ။ [PubMed]
Dreher JC, Kohn P, Berman KF ။ လူသားများတွင်ဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်များ၏ကွဲပြားစာရင်းအင်းဂုဏ်သတ္တိများ၏အာရုံကြော coding ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2005 ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ Epub ။
Elliott သည် R, Newman JL, Longe oa, Deakin JFW ။ လူသားများအတွက်ဘဏ္rewardာရေးဆုလာဘ်မှ striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် differential ကိုတုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003;23: 303-307 ။ [PubMed]
dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်မသေချာမရေရာ၏ Fiorillo CD ကို, Tobler PN, Schultz ဒဗလျူ Discrete coding ။ သိပ္ပံ။ 2003;299: 1898-1902 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2005;25: 8650-8656 ။ [PubMed]
Galvan A, Hare TA၊ Parra C၊ Penn J, Voss H, Glover G, Casey BJ ။ အစောပိုင်း orbitofrontal cortex နှင့်နှိုင်းယှဉ်သော accumbens ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌စွန့်စားသောအပြုအမူများကိုအခြေခံကောင်းကျလိမ့်မည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 6885-6892 ။ [PubMed]
Gottfried JA, O'Doherty J, Dolan RJ ။ လူ့ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး encoding ။ သိပ္ပံ။ 2003;301: 1104-1107 ။ [PubMed]
Haber SN ။ အဆိုပါမျောက် Basal ganglia: အပြိုင်နှင့် Integrated ကွန်ရက်များ။ ဓာတု Neuroanatomy ၏ဂျာနယ်။ 2003;26: 317-330 ။ [PubMed]
Hollerman J, Schultz W. Dopamine အာရုံခံများသည်သင်ယူစဉ်ကာလအတွင်းဆုလာဘ်၏ယာယီခန့်မှန်းချက်အမှားအယွင်းရှိသည် သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1998;1: 304-309 ။
Hsu M, Bhatt M, Adolphs R, Tranel D, Camerer CF. လူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မရေရာမှုအတိုင်းအတာကိုတုံ့ပြန်သည့်အာရုံကြောစနစ်များ။ သိပ္ပံ။ 2005;310: 1680-1683 ။ [PubMed]
Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, တိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Hommer ဃရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001;21: 1-5 ။
Knutson B၊ Taylor J, Kaufman M, Peterson R, Glover G. သည်မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုး၏အာရုံကြောဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2005;25: 4806-4812 ။ [PubMed]
Kringelbach ML, O'Doherty J, Rolls ET, Andrews C. လူ့ orbitofrontal cortex ကိုအရည်အစားအစာကိုလှုံ့ဆော်ရန်လှုပ်ရှားမှုသည်၎င်း၏ပုဂ္ဂလိကသာယာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2003;13: 1064-1071 ။ [PubMed]
Kringelbach ML, Rolls ET ။ လူ့ orbitofrontal cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: neuroimaging နှင့် neuropsychology မှသက်သေအထောက်အထား။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2004;72: 341-372 ။ [PubMed]
Leon MI၊ Shadlen MN ။ Macaque ၏ dorsolateral prefrontal cortex တွင်အာရုံခံဆဲလ်များ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးရလဒ်ပမာဏ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1999;24: 415-425 ။ [PubMed]
လူယာသည် SM, Laibson ပစ, Loewenstein, G, Cohen ကို JD ။ သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 2004;306: 503-507 ။ [PubMed]
Mirenowicz J ကို, မျောက် dopamine အာရုံခံအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအဘို့ခန့်မှန်းရခက်၏ Schultz ဒဗလျူအရေးပါမှု။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1994;72: 1024-1027 ။ [PubMed]
Montague PR၊ Hyman SE၊ Cohen JD ။ အပြုအမူထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine များအတွက်ကွန်ပျူတာအခန်းကဏ္။ ။ သဘာဝ။ 2004;431: 379-387 ။
O'Doherty JP ။ လူ့ ဦး နှောက်တွင်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဆုချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှုဆု - neuroimaging မှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2004;14: 769-776 ။ [PubMed]
O'Doherty JP၊ Dayan P၊ Friston K၊ Critchley H, Dolan RJ လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာယာယီကွဲပြားခြားနားမှုပုံစံများနှင့်ဆုလာဘ် -related သင်ယူမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003;38: 329-337 ။ [PubMed]
O'Doherty JP၊ Deichmann R၊ Critchley HD, Dolan RJ အဓိကအရသာဆုအတွက်မျှော်လင့်နေစဉ်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;33: 815-826 ။ [PubMed]
O'Doherty J၊ Kringelbach M, Rolls ET, Hornak J, Andrews C. လူ့ orbitofrontal cortex ရှိဆုလာဘ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2001;4: 95-102 ။
လူသား၏ orbitofrontal cortex ၏ O'Dherty J, Rolls ET, Francis S, Bowtell R, McGlone F, Kobal G, Renner B, အန်းဂျီအာရုံခံ - တိကျသောကျေနပ်ဖွယ်ရာနှင့်ဆက်စပ်သော olfactory activation ။ Neuroreport ။ 2000;11: 893-897 ။ [PubMed]
ကြားရှိ J ကို, septal ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသလျှပ်စစ်ဆွကထုတ်လုပ် Milner P. အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်။ နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1954;47: 419-427 ။
လူ့ prefrontal cortex အတွက်အခမဲ့ငွေကြေးဆုအတွက် Ramnani N၊ Elliott R၊ Athwal B၊ Passingham R. ခန့်မှန်းချက်အမှား။ NeuroImage ။ 2004;23: 777-786 ။ [PubMed]
Rescorla R၊ Wagner A. တွင်။ Classic Conditioning 2: လက်ရှိသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ Black က A, Prokasy W, အယ်ဒီတာများ။ Appleton Century-Crofts; နယူးယောက်: 1972 ။ စစ။ 64-69 ။
Robbins TW, Everitt BJ ။ ဆုလာဘ်နှင့်လှုံ့ဆျောမှု၏ Neurobehavioral ယန္တရားများ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိ Opinions ။ 1996;6: 228-235 ။
Rolls E, Kringelbach M, DeAraujo ၁။ လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2003;18: 695-703 ။ [PubMed]
Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ PR စနစ်။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997;275: 1593-1599 ။ [PubMed]
Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR ။ မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချ။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 272-284 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;36: 241-263 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူ။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုသီအိုရီ၊ ဂိမ်းသီအိုရီ၊ မိုက်ခရိုဘောဂဗေဒနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဂေဟဗေဒ၏အခြေခံဆုအတွက်အခြေခံကျသောစည်းကမ်းချက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2004;14: 139-147 ။ [PubMed]
Skinner BF ။ အားဖြည့်များ၏အချိန်ဇယားပုံကြမ်း။ အပြုအမူ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1958;1: 103-107 ။
Sutton သည် RS, Barto AG က။ အားဖြည့်သင်ယူခြင်း - နိဒါန်း။ MIT သတင်းစာ၊ ကင်းဘရစ်, MA: 1998 ။
Schultz W, Tremblay L ကို, မျောက် orbitofrontal cortex နှင့် Basal ganglia အတွက် Hollerman ဂျေဆုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000;10: 272-284 ။ [PubMed]
Talairach J ကို, Tournoux P. လူ့ဦးနှောက်၏ co-ပြို stereotaxic Atlas ။ စည်ပင်သာယာ နယူးယောက်: 1988 ။
Tobler PN, Fiorillo CD, dopamine neuron အားဖြင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး Schultz W. Adaptive coding ။ သိပ္ပံ။ 2005;307: 1642-1645 ။ [PubMed]
Tremblay L ကို, မျောက် orbitofrontal cortex အတွက် Schultz ဒဗလျူဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ သဘာဝ။ 1999;398: 704-708 ။ [PubMed]
ဗွန် Frisch K အကများဘာသာစကားနှင့်ပျားများ၏ Orientation ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း၊ ကင်းဘရစ်, မက်ဆာချူးဆက်: 1967 ။